छोटो समयमा फेशन कोरियोग्राफीमा नाम कमाउन सफल : “कोरियोग्राफर के.डि भट्टराई” – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
छोटो समयमा फेशन कोरियोग्राफीमा नाम कमाउन सफल : “कोरियोग्राफर के.डि भट्टराई”
By Digital Khabar Last updated May 29, 2020 24 0
जेठ १६ काठमाडौ । मोडलिङ तथा फेशन कोरियोग्रफिमा ब्यस्त बन्दै गएका छन् , “कोरियोग्राफर के.डि भट्टराई” ।
सन् २०१६ साल देखि मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेर निरन्तर यस क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै आएका उनि इण्डियाको मुम्बईमा रहेको “ड्रिम्स इन्स्च्युट अफ फ्लिमबाट फिल्म्स एण्ड जर्नालिज्ममा” ब्याचलर समेत गर्दै आइरहेका के.डि भट्टराई छोटो समयमानै फेशन कोरियोग्राफीमा नाम कमाउन सफल भएका छन् ।
दुई दर्जन भन्दा बेसी “राष्ट्रिय स्तरका सौन्दर्य प्रतियोगिता तथा फेशन शो” हरुमा आफ्नो कुशल कोरियोग्राफी गरेर आफुलाई अब्बल बनाउन सफल मोडल तथा कोरियोग्राफर हुन के.डि भट्टराई ।
अहिले लकडाउनमा उनी के गर्दै छन् ?
लकडाउनले मोडलिङ क्षेत्रमा के कस्ता असर परिरहेको छ?
के.डि भट्टराईसँग जिवन शर्माले गर्नु भयको कुराकानी ।
“कोरियोग्राफर के.डि भट्टराई”
१. के गर्दै हुनुन्छ ? यो लकडाउनको समयमा ?
– लकडाउनको नियमको पालना गरिरहेको छु । घरमै बसेर आगामी दिनमा के कस्ता इभेन्टहरु गर्ने भन्ने बिषयमा केही अध्यन गर्दै छु । आफुलाई स्वस्थ र फिट राख्ने कोशिश गर्दै छु ।
२. लकडाउनले मोडलिङ क्षेत्रमा के कस्ता असर परिरहेको छ?
– असर त अहिले सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ । मोडिलिङमा पनि तेहि नै हो । इभेन्टहरु गर्न झन भिड्भाडकै आवश्यकता हुन्छ। कुनै पनि हाम्रो काम अन्लाईन मार्फत हुँदैन। तेसैले गाह्रो भएको हो।
३. धेरैले अहिले अनलाईनबाट एभेन्ट गरिरहेको पनि पाइन्छ नि ?
– म यहि भन्छु, कि ! यति बेला अनलल सहि सदुपयोग गरौं ? सामाजिक सन्जालमा आफ्नो इभेन्ट्को बरेमा जानकारी दिन सकिन्छ। एभेन्ट्को प्रचार गर्ने यो सहि समय हो । तर,एभेन्ट नै अन्लाइनबाट गर्दा न ट्यालेन्टको कदर हुन्छ ? न केही। इभेन्ट नै गर्ने भए फोटो कन्टेस्ट, भिडियो कन्टेस्ट , ट्यालेन्ट हन्ट , टिकटक कन्टेस्ट जस्ता केही गर्न सकिन्छ ।
४. लकडाउन पछि तपाईंको बेस्तता के मा रहन्छ ?
– लकडाउन खुल्ना साथ नै हामिहरु एभेन्ट हरु गर्न सक्दैनौ । मोडिलिङमा रुचि रहने १०,११,१२ का सबै बिद्यार्थीहरुको परिक्षाको टुंगो लाग्न जरुरी छ । त्यो पछि पनि कोरोनाको कारण सामाजिक दुरि अप्नाउन जरुरी छ । तेसैले, म भिड्भाड नहुने अनि समाजिक दुरि अपनाउन सक्किने खालका केही एभेन्ट गर्ने सोचमा छु।
५.येदि अहिले लकडाउन नभयेको अनि सबै कुरा सामान्य भएको भए तपाईको बेस्तता के मा रहन्थ्यो ?
-येदि सबै सामान्य भएको भए अहिले एस.ई.ई.को इभेन्ट अनि ११-१२ का लागि हुने केही एभेन्ट हरुको तयारीमा थिए । नेस्ट सुपर टप्स मोडलको ४औं सन्स्करण र एस.ई.ई को केही इभेन्ट को तयारी चल्दै थियो !!
समय र जानकारीको लागि धन्यवाद ।
एकैदिन १७० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १ हजार २१२ पुग्यो
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको दुबैजनाको रिर्पोट नेगेटिभ आएपछी डिस्चार्ज